An Asian Tour Operator: ကျနော်၊ ငှက်ကလေးတွေနဲ့ ချစ်သောကမ္ဘာမြေ
ကျနော်၊ ငှက်ကလေးတွေနဲ့ ချစ်သောကမ္ဘာမြေ
တကယ်တော့ ဒီပို့စ်ဟာ ငယ်ငယ်တုန်း က အတန်းထဲမှာ ရေးခဲ့ဘူးတဲ့ သင်နှစ်သက်ရာ ဘာညာဘာညာ စသဖြင့် ရေးခဲ့ရတဲ့ စာစီစာကုံး တပုဒ်လိုပါပဲ။ ဟုတ်ပါတယ်။ တကယ်လဲ ဒါဟာ စာစီစာကုံးလေး တပုဒ်ပါပဲ။ လူတိုင်းလူတိုင်း မှာ ကိုယ်စီ ကိုယ်စီ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ လေးတွေ ရှိတတ်စမြဲပါ။ တချို့ က အ၀တ်အစား၊ တချို့က မော်တော်ကား၊ တချို့က ပစ္စည်းသေးသေးလေးတွေ၊ အသုံးအဆောင်အဆင်အယင်တွေ၊ အစားအသောက်၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်၊ စသဖြင့် အမျိုးမျိုး သူ့အကြိုက် ကိုယ့်အကြိုက် အများကြီးရှိ နိုင်ပါသေးတယ်။ ကျနော်က တော့ ယေဘုယျ အားဖြင့် သဘာဝ တရားကြီးကို မြတ်နိုးတယ်။ ကောင်းကင်ကြီးရယ်၊ တောင်တန်းတွေရယ်၊ သစ်ပင် ပန်းမန် တွေ စသဖြင့်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျနော် တိရိစ္ဆာန်တွေ ကို ပိုပြီး ချစ်တယ်။ အထူးသဖြင့် အရိုင်းသဘာဝ အတိုင်း ရှင်သန်ကျက်စား နေလေ့ရှိတဲ့ တိရိစ္ဆာန် တွေကို ပိုပြီး ချစ်တယ်။ သဘာဝ တရားကြီး ဟာ သူ့သဘာဝ အတိုင်းကို က ပင်ကို အလှရှိပြီးသား။
ကျနော်ရဲ့ ဇာတိချက်ကြွေ မွေးရပ်မြေ မြန်မာ နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း မြေလတ်ဒေသ မြို့ကလေးမှာ ကလေးဘ၀ ကို ဖြတ်သန်း စဉ် ကာလ ကတည်းက သဘာဝ ပါတ်ဝန်းကျင် ကို နည်းအမျိုးမျိုး နဲ့ ထိတွေ့ခွင့်ရခဲ့တယ်။ တကယ်လို့ တစုံတယောက် က "မင်း ဘယ် တုန်းက စပြီး သဘာဝ ပါတ်ဝန်းကျင် ကို စပြီးချစ်ခဲ့တာလဲ၊ ဘယ်သူ ကများ အဲဒီလို ချစ်တတ်အောင်သင်ပေးခဲ့ တာလဲ" လို့မေးလာခဲ့ရင် ကျနော့် ရဲ့ အဖြေ ဟာ "အဖေ" ပါပဲ။ သူဟာ ကျနော့် အတွက် တော့ အခုအချိန် အထိ ဗဟုသုတ ဟင်းလေးအိုှး အဖြစ် ရှိနေဆဲပါပဲ။ ကျနော် စကား စပြော တတ်ကတည်းက စ ပြီး မေးလိုက် တဲ့ မရေမတွက် နိုင်တဲ့ မေးခွန်း တွေဟာ အခုထက် ထိမရပ်နိုင် သေးပါဘူး။ အဖေ့ရဲ့ အဖြေတွေ ဟာ ကျနော့် အတွက် အမြဲတမ်း စိတ်ကျေနပ်စရာ တွေချည်းပါပဲ။ အဖေ့ရဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်နဲ့၊ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့၊ ဘာသာတရား နဲ့၊ သမိုင်း၊ ဓလေ့ ထုံးတမ်း စဉ်လာ တွေနဲ့ ပတ်သက် ယှက်နွယ် နေလေ့ရှိတဲ့ ပုံပြင် ၀တ္ထု ပေါင်းများစွာ ဟာ ကျနော့် ခေါင်းထဲ မှာ အခု အချိန် အထိစွဲမြဲ မှတ်မိနေဆဲပါပဲ။
အဖေ့ ကို မသိတာ တခုလောက် မေးလိုက် တာနဲ့ သူ့ဆီ က အဖြေက အချက်အလက် အကိုးအကား၊ ဥပမာ ဥပမေယျ ပေါင်း စုံနဲ့ တွဲပြီး မရပ်မနား တလစပ် ထွက်လာတော့တာပါပဲ။ သားသိပါပြီ၊ ရပါပြ၊ီ တော်လောက် ပါပြီ လို့ကို ပြောယူရပါတယ်။ ကျနော့် အဖေ အကြောင်း ရေးရ ရင် တထောင့်တည အာရေဗျ ပုံပြင် တွေ ထက် ကို ပိုပြီး ရှည်လျားထွေပြား နိုင်ပါသေးတော့တယ်။ ကျနော့် အတွက်တော့ အဖေဟာ သူရဲကောင်း ပြီးတော့ ကမ္ဘာ ပေါ်မှာ အကောင်း ဆုံးအဖေ ပါပဲ။
ကျနော် အလယ်တန်းတက် တော့ မနက် အစောကြီး လေးနာရီလောက် မှာ ထပြီး စာကျက်လေ့ရှိတယ်။ အဲဒီ အချိန်ဟာ စာထဲ မှာ အာရုံ စိုက်ပြီး ကျက်လို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲ။ မနက်စာ မစားခင် အထိပေါ့။ ကျနော့်မွေးရပ်မြေ၊ ပူပြင်းခြောက်သွေ့တဲ့ မြေလတ်ဒေသက မြို့ကလေးမှာ မနက်စောစော အချိန်တော့ အေးမြမြ လေးဖြစ်နေလေ့ရှိတယ်။ လေးနာရီ ဆိုတာ နဲ့ သပြေတန်း ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းက အုန်းမောင်းခေါက်သံ နဲ့ အတူ အဖေထတယ်။ ပြီးတော့ ကျနော့် ကို စာကျက်ဖို့ နှိုး လေ့ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အဖ ဘယ်တော့မှ ပြန်မအိပ်ဖူး၊ ရေနွေးကြမ်း တအိုး နဲ့ စာအုပ် တအုပ်နဲ့ စောင့်ပေးလေ့ရှိတယ်။ တခါတလေ ကျနော် ငိုက်ရင် သတိပေးရ အောင်လို့ပေါ့။ "သား" ဆိုပြီး အဖေ သတိပေး တာနဲ့ ကျနော် လဲ ဆိုမိ ဆိုရာ ထပြီး ဆိုတော့တာပဲ (မှတ်မိနေသေးတာလေး ကတော့ "ဦးဖိုးကျား၊ ဦးဖိုးကျားသည် ဟင်္သတမြို့နယ် နိဗ္ဗာန်ရွာ သားဖြစ်သည်")။ စာကျက်လို့ ခန အကြာမှာ တော့ ငှက်ကလေး တွေ တေးသီချင်း သီကြွေး သံ ကို စ ကြားရပါတော့ တယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီငှက် ကလေးရဲ့ ထူးခြား ပြီး အမျိုးမျိုး အော်မြည်တတ်တဲ့ သာယာနာပျော်ဖွယ် အသံလေး တွေကြောင့် ပါ။ အဖေ့ ကို အဲဒါ ဘာငှက်လဲ မေးတော့ "ငှက်ကျား" လို့လဲခေါ်တယ် "သပိတ်လွယ်ငှက်" လို့လဲခေါ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာ စာဆက်ပြီးမကျက်ရတော့ ပဲ သပိတ်လွယ်ငှက်နဲ့ ဆက်စပ်ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းတွေ ဆက်ပြောပါတော့တယ်။ ငှက်ကလေးဟာ အဖြူနဲ့ အနက်ကျား လေးပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးတွေ ဆွမ်းခံတဲ့အခါလွယ်တဲ့ သပိတ်ကလေး ကို လွယ်နေတဲ့ ပုံစံလေးကြောင့် သပိတ်လွယ် လို့ခေါ်တယ်ပေါ့။ နောင် အနှစ် ၂၀ လောက် ကြာလို့ ကျနော် "မြန်မာနိုင်ငံ ငှက်နဲ့ သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး အသင်း" ကိုရောက်တော့ မှ ကျနော်ကြားခဲ့ မြင့်ခဲ့ရတဲ့ အဲဒီငှက် ကလေးတွေ ကို "Magpie Robin" လို့ခေါ်တာ သိလာရပါတော့တယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကျော်က အကြောင်းအမျိုးမျိုး ကြောင့် ကျနော်တို့ မိသားစု ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီး ကိုပြောင်းလာခါစမှာ လူနေထူထပ်တဲ့ မြို့တနေရာ က ခြောက်ထပ်တိုက်ကြီး ရဲ့ အခန်း ကျဉ်းကျဉ်းလေး မှာ နေခဲ့ရပါတယ်။ ကျနော်ချစ်တဲ့ ငှက်ကလေးတွေရဲ့ တေးသီချင်း သီကြွေးသံလေးတွေနဲ့ နှစ် အတန်ကြာ ဝေးကွာ နေခဲ့ရပါတယ်။ နောက်မှ ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီး ရဲ့ ဆင်ခြေဖုန်း မြို့သစ်ကလေး ကိုပြောင်းလာဖြစ်တော့ အရိပ်ရမယ့်အပင်ရော၊ စားပင်သီးပင်၊ ပန်းပင် ကလေးတွေ မိသားစုတတွေ တက်ညီလက်ညီ စိုက်ကြပါတယ်။ ကျနော် သတိထားမိတဲ့ မနက်ခင်း တခုမှာ ကျနော့် ချစ်တဲ့ ငှက်ကလေး တွေရဲ့ မနက်ချိန်ခါတေးသံသာ ကို ကြည်နူးနှစ်သက်စွာ ပြန်လည်ကြား ရပါတော့တယ်။ ။
အမှာစကား ။ ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဂျူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့ကကျနော့်ဘလောက်မှာ တင် ခဲ့တဲ့ Birds, Nature & Me -3ကိုအခါအားလျော် စွာ ပြန်ဖတ်မိပြီး အဆင်ပြေသလို မြန်မာလို ပြန်ရေးပါတယ်။ အဲဒီအချိန် ကတည်း က စိတ်ကူးတည့် ရာ ရေးချင်သလို ရေးတဲ့ ပို့စ်တွေအမြဲလို လာဖတ်ပြီး ကွန်မန့်ပေးခဲ့တဲ့ အစ်မငယ်နိုင် ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီမနက် မှာ အစ်မ ချစ်ကြည်အေး နဲ့ ချက်တင်း လုပ်ဖြစ်ပြီး အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပြီး အမေနဲ့အဖေ ကိုရော ငယ်ငယ်တုန်း က အကြောင်းတွေ ပါပြန်သတိ အောက်မေ့သွား တာ ကနေဒီပို့စ် ကိုရေးဖြစ်တာပါ။
Birds, Nature & Me - 3
Actually this post is like an "Essay" which we used to write in the classroom when we were in school-age (something like "Write an essay about your favorite blah blah blah"). Yes. It is really the same like this. Everyone has their favorite things perhaps these can be cloths, cars, small tools, ornaments, foods, pets, animals and it can be varied. In fact, I love nature in general; sky, mountain ranges, trees and plats, flowers and faunas etc.. but especially I love more to animals those in natural habitats, wild. Nature in the Nature has already their own beauty..
Since I was in my childhood, growing in typical small town in central Myanmar, I love to touch the nature in different way. If there is question asking "how did you start to love the nature and who did you to love it?", my answer is all about my father who is my knowledge bank (until now). Since I started talk and made uncountable questions to him, he answers and (always) satisfied me. He told me uncountable numbers of stories related to nature, culture, religion, beliefs, history, and many of subjects which are still stuck in my mind.
Once I askedaquestion, the answer come out from him with various facts and quotations. He can not even stop :) Sometime I said, father that is more than enough for me. If I write about my father, it would become like Arabian Tales (for one thousand and one night perhaps even more). He is my hero and ever the best father of mine.
When I was in middle school (secondary school), I used to study in early morning about4am onwards which is the best time to study and for me to get more concentration. I used to studied until before breakfast. The weather is usually cool in the small town of typical dry zone in central Myanmar. My father always wake me up for my early morning study and he never went back to sleep (he just waiting probably readingabook withapot of Myanmar tea) and accompany me. After awhile we started to hear beautiful songs singing from the guava tree inside our house compound. The song had quite high tone and beautiful melody (I notice it is eight to 14 diffient tone and melody). I asked what kind of bird is it. He said "Nget Kyar (ငှက် ကျား - actualy there is another bird with same name which is completely different - water bird) also known as Tha Baik Lwal (သ ပိတ် လွယ်)". The color of the bird is only Black & White (it can be varied) and the feature isabird caring an alm bow (Buddhist monks equipment). Later after twenty over years, once I joined Myanmar Birds & Nature Society, I knew it is called "Magpie Robin" precisely the birds I saw are "Oriental Magpie Robin (Copsychus saularis)".
Our family relocated to the capital city in Yangon overadecade ago, we were in subarbs of Yangon inanarrow apartment of6storied building. I lost my lovely songs for years. Then after we settled down in newly established town - outskirt of Yangon city center (about 20 kilometers). We grew some plants and trees in our house compound. Again, I started to get back my favourite birds singing as "Moning Section Music (မ နက် ချိန် ခါ တေး သံ သာ)".
Photos:-Photos were taken from below sources and posted in this post before but after insisted by the original photographer, I deleted from the post accordingly. (updated on 2226 hrs local time, 18 March 2011).
When I was in middle school (secondary school), I used to study in early morning about4am onwards which is the best time to study and for me to get more concentration. I used to studied until before breakfast. The weather is usually cool in the small town of typica l dry zone in central Myanmar. My father always wake me up for my early morning study and he never went back to sleep (he just waiting probably readingabook withapot of Myanmar tea) and accompany me. After awhile we started to hear beautiful songs singing from the guava tree inside our house compound. The song had quite high tone and beautiful melody (I notice it is eight to 14 diffient tone and melody). I asked what kind of bird is it. He said "Nget Kyar (ငှက် ကျား - actualy there is another bird with same name which is completely different - water bird) also known as Tha Baik Lwal (သ ပိတ် လွယ်)". The color of the bird is only Black & White (it can be varied) and the feature isabird caring an alm bow (Buddhist monks equipment). Later after twenty over years, once I joined Myanmar Birds & Nature Society, I knew it is called "Magpie Robin" precisely the birds I saw are "Oriental Magpie Robin (Copsychus saularis)".
Posted by An Asian Tour Operator at 2/22/2011 11:57:00 AM
Labels: Birds, English Posts, Nature, မြန်မာ ပို့စ်, မြန်မာပို့စ်
ဟိုတုန်းက သာ ကိုအေအေတူနဲ့ တွေ့ဆုံဖြစ်ရင်လဲ ကျွန်တော်ပြေးပေါက်မှားလောက်တယ်..
တို့က လောက်စာလုံး လွယ်အိတ်ကို စလွယ်သိုင်းပြီး လေးခွတစ်လက်နဲ့ စာကလေး စားရက် သပိတ်လွယ် အစ ကျီးကန်းနဲ့ ဗျိုင်းပါမကျန် လိုက်ပစ်တတ်တာဗျာ
2:01 PM, February 22, 2011
အရင်တုန်းကတော့ ငှက်တွေရင် ကျော်စားဘို့လောက်သာသိတယ် အခုတော့နဲနဲတော်လာပါပြီ ဈေးထဲမှာ တွေ့ရင်တောင် မစားဖြစ်တော့ပါဘူး
6:41 PM, February 22, 2011
တိရစ္ဆာန်တွေကို မချစ်တတ်ပေမဲ့... သူတို့လေးတွေကို သနားတာတော့အမှန်..
7:37 PM, February 22, 2011
လသာညလည်း ငယ်ငယ်က အဖေရဲ့ပုံပြင်တစ်ထောင်နဲ့ အားမာန်ယူပြီး ကြိုးစားခဲ့ရသူပါ..။ ပုံပြင်ကြိုက်တဲ့အရွယ်မှာ အဖေက ပတ်ဝန်းကျင်ကအကြောင်းအရာတွေကို ပုံပြင်လိုလုပ်ပြောခဲ့တယ်..။
8:20 PM, February 22, 2011
၀ဲဒုက္ခကြောင့် အခုမှ ရောက်တယ် ကိုAATO
ရေ၊ နေကောင်းပါစ ...
8:52 PM, February 22, 2011
အရေးကောင်းတဲ့ အက်ဆေး တစ်ပုဒ်ပါပဲ။
အမှတ် ၂၀ အပြည့်ပေးရမှာပါပဲ။
ကျနော်လည်း သဘာဝတရားကို ချစ်တယ်။ ရာသီဥတုတွေ ယိုယွင်းလာတာ တောတွေ မျိုးတုံးတာကို မချင့်မရဲ ဖြစ်မိတယ်။ လောလောဆယ်တော့ ထိထိရောက်ရောက် ကာကွယ်ဖို့ မစွမ်းဆောင် နိင်သေးဘူး။ ပညာပေးပို့စ်လေးလောက်တော့ ရေးဖြစ်အောင် ကြိုးစားအုံးမယ်ဗျာ။
2:16 AM, February 24, 2011
This isaquestion for the webmaster/admin here at anasiantouroperator.blogspot.com.
12:22 AM, March 04, 2011
ငှက်ကျားနဲ့ သပိတ်လွယ်ငှက်က အတူတူကိုး ...
တကျော့နှစ်ကျော့ တေးကိုသီ ငှက်ကျား နှုတ်ပလီ ... ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးနဲ့ ငှက်ကျားကို ရင်းနှီးခဲ့ပေမဲ့ ဘယ်လိုငှက်မျိုးဆိုတာ မသိခဲ့ဘူး။
ငှက်ကလေးတွေကို ချစ်ပေမဲ့ လှောင်ပြီးမမွေးချင်ဘူး သူ့သဘာဝအတိုင်းပဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပျံစေချင်တယ်။ ယတြာချေတဲ့သူတွေ ငှက်လွှတ်ဖို့အတွက် ဖမ်းပီး လှောင်ထားတာတွေ မြင်ရတာလဲ စိတ်ထဲ မကောင်းဘူး။
7:05 AM, March 04, 2011
- အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
- to Jhon: You may use the information from my post but please provide the link of my blog. Again, please let me know your link once you have published your creation / article.
- အစ်မမေဓာဝီ။ ။ အစ်မပြောတဲ့ သီချင်းထဲ က ငှက်ကျား က ကျနော်တို့ ငယ်ငယ် ပုံပြင်ထဲ က ငှက်ကျား ဖြစ်ဖို့ များပါတယ်။ အဲဒီငှက်ကျား က ရေငှက် (waterbird) စာရင်းထဲမှာ အကြုံးဝင်တဲ့ ငှက်ကျား (Stork) ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တိရိစ္ဆာန်တွေထဲမှာ ငှက်ကို စိတ်ဝင်အစားဆုံး အကြိုက်ဆုံးပဲ။ ကြိုက်တာလည်း အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ အိမ်မွေးတိရိစ္တာန်အဖြစ် ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူး သဘာဝအတိုင်းရှိနေတာကို စောင့်ကြည့်ရတာကိုပဲ သဘောကျတယ်။
5:44 PM, May 02, 2011